The Gardener: လောလောဆယ် ဖြတ်မျဉ်းများ။
အခု The world is flat ကို ဆရာကျော်ဝင်းဘာသာပြန်ထားတာ ဖတ်ရင်း ... တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်။ မြန်မာစာကို မြန်မာနားမလည်တာတွေပါနေတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကို ဘာသာပြန်ဖို့ခက်တာတွေကို အတင်းကြီးပြန်ထားတာတွေလည်းတွေ့တယ်။ ခေါ(လ)စင်တာဆိုတော့ Call centre ကိုဆိုလိုဟန်တူတယ်။ နောက်ဖေးရုံးခန်းဆိုတာတော့ ခန့်မှန်းနေတုန်းပဲ။ ဆုပ်ဆုပ်ကိုင်ကိုင်မပြနိုင်တဲ့အရာ ဆိုတာလည်းပါတယ်။ သေချာပါတယ်။ ကျွန်တော် The world is flat မူရင်းဝယ်ပြီး တိုက်ဖတ်ကြည့်တာပိုအဆင်ပြေမယ်။ ဘာသာပြန်အခက်အခဲကိုပြောချင်တာပါ။ မြန်မာပြည်မှာ လိုအပ်တဲ့စာအုပ်တွေ ဘာသာပြန်ပေးနေတဲ့ကျေးဇူးကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ တတ်နိုင်ရင်တော့ အဲဒီလို နားလည်ရခက်တဲ့စာလုံးတွေနောက်မှာ မူရင်း စကားလုံးလေးကို အင်္ဂလိပ်လိုလေးများရေးပေးလိုက်ရင် ပိုပြီးသဘောပေါက်လွယ်သွားမယ်ထင်တယ်။ အဲဒီစကားလုံးလေးတွေမသိရုံနဲ့ မူရင်းရသတော့မပျောက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စာပေဗိမာန်စာမူဆုရတဲ့စာအုပ်ကြီးကို ဒီထက်ပိုမျှော်လင့်တာတော့အမှန်ပဲ။
ဒီဘိုးနိုး ...ဆိုတဲ့သူကိုလည်း အတော်လေး လေးစားတယ်။ သူ့ကို six thinking hats အယူအဆမူပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းက ဒီဘိုနိုးထွင်တာလား၊ ကျောင်းက ထွင်ပြီးသားကို သူက ချဲ့ထွင်တာလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားတာ ဟိုတလောက ပြန်ရှာဖတ်ကြည့်တယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ ဟိုတစ်ပါတ်က စာကြည့်တိုက်မှာ စာအုပ်တွေ နှစ်ဆငှားခွင့်ပြုနေတဲ့အတွက် အပို ထပ်ငှားလာတာ Master thinker's handbook ဆိုတာလည်းပါတယ်။ ဒီဘိုနိုးရေးတာပဲ။ စာအုပ်ကို ဖေဖော်ဝါရီလမှာ မြန်မာတစ်ယောက်ငှားသွားသေးတယ်လို့ ညပ်နေတဲ့ဖြတ်ပိုင်းအရသိရတယ်။ အဲဒီစာအုပ်မှာတော့ ခန္ဒာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ Thinking Technique တစ်ခုလုပ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ BFT လို့ခေါ်ပါတယ်။ Body Frame Thinking ပါ။ Object-Oriented Concepts တွေနားလည်ရင် ခဏလေးနဲ့နားလည်သွားပါမယ်။ သူက ရိုးရှင်းထိရောက်တာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ၀ါသနာပါရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဝယ်ဖတ်ပါ။ ငှားဖတ်ပါ။
အဲဒီစာအုပ်လည်း အတော်လေးခိုးခံထိထားတယ်။ On trace ဆိုတာတွေချည်းပဲ။ စင်ကာပူက စာကြည့်တိုက်တွေမှာ အခိုးအခံရဆုံးစာအုပ်များလားမသိဘူး။ Essay ရှည်ဖြစ်တယ်။ Reserved လုပ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံကာမိအောင် scan ဖတ်ထားလိုက်တယ်။ (Library Blog ဘက်မှာတင်ရမယ်။) စင်ကာပူမှာ လူများပစ္စည်းအချောင်လိုချင်တဲ့သူတော်တော်များတယ်။ မယုံရင် အိုင်ဖုန်းလေးပဲ ချထားကြည့် ပြန်လာမပေးတော့ဘူး။ အဲဒါ ဖော်ရိန်းတဲလန့်(Foreign Talent)က ပြန်လာမပေးတာလား၊ နိုင်ငံသားက ပြန်လာမပေးတာလား စစ်တမ်းတော့ကောက်သင့်တယ်။ ပြောချင်တာက (ပိုက်ဆံအိတ်ပျောက်လို့ ကဒ်ပါသွားတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရ) ကောက်ရတဲ့ အိုင်စီကို အသုံးပြုပြီး လိုင်ဘရီမှာ စာအုပ်တွေခိုးသွားလို့ ပြန်လျော်ပေးရတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ကြားသိရတယ်။ အာလားမား။
ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်ရခက်လာတယ်။ အကုန်လုံးက ခွင့်ယူဖို့တွေပဲတွေးပြီး မေးလ်ပြန်ဖို့တောင် ဖုန်းဆက်ပြီးပြောရတယ်။ ... ဒီဇင်ဘာလဟာ အလုပ်လုပ်ဖို့ မသင့်တော်တဲ့လဖြစ်တယ်လို့တွေးမိတယ်။
အဲဒီစုံထောက်ကားကို နှစ်ပါတ်ဆက်တိုက်ကြည့်လိုက်တာ Season3(Episodes ၅၅ နီးပါးအထိကြည့်ပြီးပြီ)တစ်ဝက်ကျိုးတဲ့အထိပြီးသွားပါပြီ။ စုံထောက်ကားကြိုက်တဲ့သူတွေသိပါတယ်။ ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ အတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ Season တစ်ခုကို ဒီဗီဒီဝယ်ကြည့်ရင်တော့ ၅၀၊ ၆၀ လောက်ကျမယ်။ ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေက ခဲရာခဲဆစ်ဒေါင်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံ ၁၅၀ လောက် အပိုမသုံးဖြစ်ဘူးဆိုပြီး အတော်လေးကျေနပ်သွားနိုင်တယ်။
Ladies and gentlecars
Ladies and gentlemen ကို Cars ဆိုတဲ့ကာတွန်းကားထဲမှာ (သူတို့က ကားလောကသားတွေမို့လို့) လေဒီအင်န်ဂျန်ထယ်ခါးစ် ဆိုပြီး ကားပြိုင်ပွဲမှာအဖွင့်မှာအော်ပါတယ်။ အတော်လေး သဘောကျမိပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကထွက်လာခါနီးမှာတစ်ခေါက်ကြည့်ပြီးသားကို အခုတစ်ခါ revision ပြန်ကြည့်ပါတယ်။ ကာတွန်းကားတွေဟာ ကျောင်းစာလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာသွားပါတယ်။ ကျောင်းစာတွေဆို မေ့သွားသည့်တိုင်အောင် ပြန်ဖတ်ကြည့်ဖို့စိတ်မကူးပါဘူး။ ငယ်တုန်းကသင်ပေးလိုက်တဲ့ Gates 48 ခုလောက်ပါတဲ့ logic diagram လေးမမှတ်မိလို့ ပြန်ရှာကြည့်နေတယ်ဆိုတာမျိုး ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ပါဘူး။
ဒီအပါတ်ထဲမှာ Revision ပြန်ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ် ကားတွန်းကားတစ်ကားပါ။ အရင်တစ်ခေါက်ကြည့်တုန်းက စာတန်းမထိုးလို့ အကုန်လုံးမရယ်လိုက်ရတာကို စာတမ်းထိုးတာထပ်ကြည့်ပြီး အပြည့်အ၀ရယ်လိုက်ပါတယ်။ Dreamworks Animation ကို လက်မနှစ်ချောင်းထောင်ပါတယ်။ အဲဒီကားထဲမှာ ဟစ်ကပ်(ဖ)(Hiccup ) ထက် the Night Fury "Toothless" ပိုသဘောကျပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွေကို ကာတွန်းကားတွေလောက်ကို အနုပညာမြောက်အောင်ရိုက်ဖို့ခက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကာတွန်းမှာ စိတ်ကူးက ကွန့်မြူးချင်သလောက်ကွန့်မြူးလို့ရတဲ့အတွက် ပိုပြီး စိတ်လက်ပေါ့ပါးပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သတိထားကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ logic ထဲမှာပိတ်မိနေတာကြာပါပြီ။ ဒီလိုဆိုရင် ဒီလိုပဲ အသေမှတ်ထားတယ်။ ဥပမာ နတ်ဆိုးဆိုပါတော့ ...။ ရုပ်ဆိုးဆိုးကောင်ပဲပြေးမြင်ကြတယ်။ ကျမ်းစာအရဆိုရင် စာတန်ဟာ ဘုရားသခင်လောက်နီးပါး ရုပ်ဖြောင့်တဲ့ နတ်သားလို့ဆိုတယ်။ ကိုးရီးယားကားထဲက မင်းသားထက်ချောတဲ့ဗီလိန်လိုဖြစ်နေပြီ။.. အဲဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်။ ထင်နေတာကြီးနဲ့ပိတ်မိနေတဲ့စိတ်တွေကို relax လုပ်ဖို့ ကာတွန်းကားများများကြည့်သင့်တယ်။ ကာတွန်းကားထဲမှာ မဖြစ်နိုင်တာ ဘာမှမရှိဘူး။ နဂါးကလည်း ပြုံးပြချင် ပြုံးပြမယ်။ ချစ်စရာကောင်းချင်လည်းကောင်းနေမယ်။ သာမန် အခြေအနေမှာ လက်မခံနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကို ကာတွန်းကားထဲမှာတော့ လက်ခံလိုက်ရတာပဲ။ ဘ၀ကြီးကလည်း ကာတွန်းကားလိုပဲ။ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ သူဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေတာကို လက်ခံပေးနေကြရတာပဲမဟုတ်လား။
အိမ်မက်ထဲမှာ အိမ်မက်ဆက်မက်ကြစို့ လို့ ကျောင်းမှာတုန်းက ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးဖူးတယ်။ ၂၀၀၂ လောက်က။ အခုတော့ ဒီဒါရိုက်တာကလည်း အိမ်မက်ထဲမှာ အိမ်မက်ကို အကွက်ဆင်ပြီးမက်ဖို့ကြိုးစားတာကိုတွေ့ရတယ်။ Impressive!!!စိတ်ရှည်လက်ရှည်ကြည့်ဖို့တော့လိုတယ်။ Zသိမ်းပိုင်းကို အရင်ကြည့်ထားတဲ့အတွက် ရှေ့ပိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဒါကလည်း မြန်မာ့ရိုးရာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးနည်းအရကြည့်တာပါ။ မြန်မာကားတွေဘယ်လိုရိုက်သလဲဆိုတာ သိကြလားမသိဘူး။ ကြုံတဲ့အခန်းအရင်ရိုက်တာပဲ။ ဒီနေ့ မိုးရွာနေတယ်ဆိုပါတော့ outdoors မရိုက်နိုင်ဘူး။ ဒါဆိုလည်းကိစ္စမရှိဘူး။ အိမ်ထဲမှာ ဇာတ်သိမ်းခန်းဖြစ်ဖြစ်အရင်ရိုက်ထားလိုက်တယ်။ တခါတလေ costumes အတွက် ပြင်ဆင်တဲ့သူက ဘယ်အ၀တ်အစားအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာ မှတ်ထားတာမှားတဲ့အခါ ထိုင်နေရင်းနဲ့ အ၀တ်အစားတွေပြောင်းသွားတာမျိုးတွေပါ အံ့သြဖွယ်ခံစားရတယ်။ ငွေတမတ်နဲ့ ငါးကြင်းခေါင်းကိုင်တယ်ဆိုတာလိုမျိုးဖြစ်နေမလားမသိဘူး။ သူ့အရပ်နဲ့သူ့Z ဥိုခေရင် ပြီးတာပါပဲလေ။
စုံထောက်ဇာတ်လမ်းတွဲနောက်တစ်ခုပါပဲ။ Coma ရနေတဲ့သူဆီက နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကို ကြိုးနဲ့သွယ်ပြီး ယူတယ်ဆိုလို့ အတော်စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အဲဒီလိုမျိုးတွေတော်တော်လုပ်လာပါတယ်။ အဗာတာ(Avator)မှာ အမြီးကနေ USB ဖြစ်နေတာမျိုးတွေ ...။ Monk တို့ Mentalist တို့လိုတော့ သိပ်ပြီး မဆွဲဆောင်နိုင်သေးပါဘူး။ Season တစ်ခုလောက်ကြည့်ပြီးမှ အမြင်ပြောင်းမလားမသိဘူး။
ဒါကတော့ Anthony Hopkins (Sir Philip Anthony Hopkins) ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ကြည့်ဖြစ်သွားတာပါ။ သူကတော့ သရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ ကွက်တိအကျဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် psycho ဇတ်ကောင်စရိုက်တွေမှာ ပီပြင်လွန်းပါတယ်။ နောက်ပြီး သူပြောတဲ့ဟန်က အင်မတန်သေသပ်ပါတယ်။ ဂျူရီလူကြီးကိုပြန်ပြောတဲ့အခန်းဆို (အင်မတန်)x77 သဘောကျပါတယ်။ The Silence of the Lambs, ကတည်းက သူ့ကို မှတ်မိသွားတာပါ။ အဲဒီကားရဲ့အဆက် Hannibal နဲ့ Red Dragon တွေကိုလည်း အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဘွဲ့ရအလုပ်လက်မဲ့ဘ၀မှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဗီဒီယို လေးကားကနေ ခြောက်ကားလောက်အထိကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာတော့ ဘ၀ဆိုတာ ဗီဒီယိုကြည့်ခြင်းနဲ့ ထမင်းစားခြင်းပါပဲ။ နောက်ထပ် Hopkins ရဲ့မမေ့နိုင်တဲ့ကားကတော့ ၁၉၉၄ ကရိုက်တဲ့ Lengends of the fall ဖြစ်ပါတယ်။Tristan Ludlow အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ Brad Pitt အင်မတန်မှ နာမည်ရသွားတဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်လမ်းကို ခါတော်မီ မြန်မာကာတွန်းဆရာတွေက ကာတွန်းအဖြစ်ရေးလိုက်ပါသေးတယ်။ ဂျူးကလည်း ရုပ်ရှုင်ခံစားမှုဆောင်းပါးရေးလိုက်ပါသေးတယ်။ ကာတွန်းရော၊ ရုပ်ရှင်ခံစားမှုဆောင်းပါးပါ အတော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတာမှတ်မိပါတယ်။ ကျောင်းစာတွေသာမေ့သွားတယ်။ ဒါမျိုးတွေကတော့ သေခါနီးတောင်မေ့ပါ့မလားမသိဘူး။ :P
ဟယ်ရီပေါ့ထားရဲ့ အမာခံပရိတ်သတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုသာ သူ နင်းဘတ်တံမျက်စည်းပေါ်ကပြုတ်ကျလာရင် သေဖို့ရှိပါတယ်။ အားလုံးက အမာခံပရိတ်သတ်ဖြစ်နေလို့ အကျတော်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Harry Potters ကို စာအုပ်မဖတ်ဘဲ ဇာတ်လမ်းပဲကြည့်ရင် အရသာမရှိပါဘူး။ အများကြီးလွတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ စာအုပ်ဖတ်ပြီး ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ။ အင်မတန်မှ အရသာရှိပါလိမ့်မယ်။ အခန်းမှောင်နေတာလေးကို နှစ်မျက်နှာလောက်ဖွဲ့တာနဲ့ တစ်နာရီခွဲလောက်ပဲကြာတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့တော့ ယှဉ်ပြောစရာမလိုအောင်ကွာပါတယ်။ ဂျေကေ ရိုးလင်း (J.K Rowling) အကြောင်းကိုလည်း မြန်မာပြည်မှာတုန်းက အင်တာနက်ရှင်းနယ်(International) မဂ္ဂဇင်းမှာဖတ်လိုက်ဖူးပါတယ်။ (အိမ်ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်အောင် မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာတွေဝယ်ပေးပေမယ့် တစ်ခါမှ အင်္ဂလိပ်လိုမဖတ်ဘူးထင်ပါတယ်။ ) ရိုးလင်းခမျာ အေးလို့ စာရေးဖို့ကို ကော်ဖီဆိုင်မှာသွားသွားရေးရတာ သနားဖို့တောင်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့သမီးလေးအတွက် ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း သဘောကျပါတယ်။ မှော်လောကကြီးတစ်ခုကို ရေးဖို့ဆိုတာ အတော်ကြီးကိုခက်ပါတယ်။ မအောင်မြင်ခင်က ထုတ်ဝေသူခက်နေလို့ မြန်မာပြည်မှာပူစီနှစ်ကောင် စာအုပ်တိုက်တွေဘာတွေကိုတောင်ချဉ်းကပ်သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ မလိုအပ်ဘဲကလေးတွေနားလည်အောင် အကြာကြီးရှုင်းပြနေတာတွေကလွဲရင် ဖတ်ကြည့်သင့်တဲ့စာအုပ်ပါပဲ။ စာအုပ်ဖတ်ပြီးရင် ဗစ်ဒီယို(hi buddy, xanthos , pls check my pronunciation ...haha) (video) ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ။ ဘယ်အရာမဆို ပြီးစလွယ်မလုပ်လိုက်ပါနဲ့။ ဇာတ်လမ်းကို အရသာခံဖို့ဆိုတာ သိသင့်တာသိမှ ပိုပြီး အရသာရှိပါတယ်။ (ချွင်းချက်ကတော့ မြန်မာကားတွေပါ။ ၀တ္ထုဖတ်ပြီးရင် ဆုတောင်းနေမိတာက ရုပ်ရှင်မရိုက်ပါစေနဲ့ ..ရုပ်ရှင်မရိုက်ပါစေနဲ့ဆိုတာပါပဲ။ မရိုက်လိုက်နဲ့... ရိုက်လိုက်တာနဲ့ ပျက်ပြီ။)
The gardener in X'mas mood ..
Posted from office (I didn't say I wrote @ 0ffice :P)
ဒီပို့စ်ကတော့ ရုပ်ရှင်တွေ ဒီလောက်ကြည့်နေပြီးဘာမှရေးတာမတွေ့ရဘူးဆိုတဲ့သူတွေ တွေ့ရအောင်ပါ။ ရုပ်ရှုင်ဇာတ်လမ်းတွေကို ပြန်ပြောပြရတာဝါသနာပါပေမယ့် ရေးရမှတော့ အင်မတန်ပျင်းပါတယ်။ ငယ်တုန်းကတော့ ကြည့်ပြီးတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကို တစ်စုံတစ်ယောက်ဖတ်ဖို့ ပြန်ရေးထားပါတယ်။ ရှေ့မှာရေးသွားကြတဲ့ သစ္စာနီနဲ့ဂျူးတို့လို ရုပ်ရှင်ခံစားမှုမျိုးရေးနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ နောက်တော့လည်း ပျင်းသွားတယ်ထင်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးမကြိုးစားတော့ပါဘူး။
ကာတွန်းကားတွေအကြောင်းတော့ အားတဲ့အခါ အသေးစိတ်ရေးဖို့ရှိပါတယ်။ ရေးလက်စတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကာတွန်းကားနဲ့ပညာရေး ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါ။ အသက် ၂၉ နှစ်ပြည့်ခါနီးမှာ ဘ၀ကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါ Walt Disney Blue ဖြစ်နေပါတယ်။ ကာတွန်းကားကလို မထော်မနမ်းတွေ အများကြီးပါတဲ့လောကကြီးမှာ သိပ်အများကြီးပျော်စရာမရှိသလို၊ စိတ်ညစ်စရာလည်းမရှိပါဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးတွေကို သူများအတွက် မကုန်သွားအောင် သတိထားမယ်ဆိုရင် ဘ၀ကို ပိုပြီး ပြည့်ပြည့်၀၀ နေသွားတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပါ။ သူများအတွက် အချိန်များများကုန်သွားတဲ့အခါ ... ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတွေ မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ ဘ၀မှာ ဂငယ်ကွေ့တွေက သိပ်ဝေးလွန်းတယ်။ လမ်းတစ်ခုခုရွေးတာမှားသွားရင် ပြန်လှည့်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူး။ အကျင့်မပါသင့်တာတစ်ခုခု အကျင့်ပါသွားရင် ပြန်ပြုပြင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိတာတွေများများလုပ်ရင် စိတ်ချမ်းသာရမှာပါ။ ပျော်မယ်ထင်လို့ လုပ်နေတာတွေဟာ တကယ်တမ်းမှာ မပျော်ဖို့ပဲဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အသိဉာဏ်ကိုလေးစားတဲ့ အလုပ်တွေမလုပ်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားလို့မရပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားလို့မရရင်တော့ ဒီဘ၀ဟာ Game over ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဘ၀ဟာ တိုတိုလေးပါ။ ဒီ ဘ၀တိုတိုလေးထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ပျက်စရာလို့ မထင်အောင်နေတတ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုမလဲ။ ဘ၀ကို အလောတကြီးသွားနေမယ့်အစား၊ ခဏလေးရပ်ပြီး ငါသွားနေတာမှန်ရဲ့လားလို့ ရပ်တွေးကြည့်ဖို့မကောင်းဘူးလား .....။ နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းသွားရမယ့်လမ်းတွေရှိသေးတယ်။ ... တစ်ယောက်တည်းလျှောက်သွားရမှာဖြစ်လို့ တစ်ယောက်တည်း လမ်းဖြောင့်ဖြောင့်လျှောက်တတ်ဖို့လည်း လေ့လာဖို့လိုမှာပါပဲ။ ဒီနေ့အတွက်မေးခွန်းဟာ သင်တစ်ယောက်တည်း လမ်းဖြောင့်ဖြောင့်လျှောက်နိုင်ပြီလားဆိုတာပါပဲ။ အနားမှာ ဘယ်သူမှမရှိတော့ရင် နေလို့ရပြီလား။ Peace B With U all ...
post အတွက် ပုံကို yeyene ဆွဲထားတာ အတော်လေးသဘောကျပါတယ်။
ပုံကို သေချာကြည့်ရင် စာရေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကြည့်ကြည့်ပါဦး။ Slim, Smart and Sexy Web Designer ရဲ့ Good,Great, and Gorgeous Image ဖြစ်ပါတယ်။ LOL.
Labels: daily lif3